'साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार' संवाद; निती | साहित्यपोस्ट
उपन्यास लेखिरहँदा पुरस्कारजस्ता शब्द मेरो कल्पनाबाहिरका कुरा थिए - मीरा गोतामे
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित २९ जेष्ठ २०७९ १९:०१
यहाँ उत्कृष्ट एघारमा छनोट भएको उपन्यास ‘निती’की स्रष्टा मीरा गोतामेसँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईँको पहिलोकृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार”का लागि उत्कृष्ट पुस्तकको सूचीमा पर्न सफल भयो । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
आफ्नो पहिलो प्रयासलाई यसरी उचित मुल्याङ्कन हुनुले मेरो जीवनमा ठूलो अर्थ राखेको छ । यो हिसाबले म खुसी छु । शिक्षण पेशाबाट एकाएक हामफालेर साहित्यमा पाइला चालेकी मलाई आफ्नो कदम सही स्थानमा चालेकी रहेछु भन्ने विश्वास जागेको छ । अब अझै गहकिला पुस्तकहरु लेख्ने उत्प्रेरणा मिलेको छ । नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागी जिम्मेवारी बोध गराएको छ ।
सर्वप्रथम बताइहालौं कि “निती” उपन्यास लेखिरहँदा पुरस्कारजस्ता शब्द मेरो कल्पनाबाहिरका कुरा थिए । अर्थात् पुरस्कारको अपेक्षाले यो उपन्यास पटक्कै लेखेकी होइन । समाजका विकृती विसङ्गतिलाई उजागर गर्न यो पुस्तक लेखेकी हुँ । पुरस्कारको प्रलोभनमा साहित्य लेखियो भने लेखकको मौलिकता मर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साहित्यपोस्टले पुरस्कार घोषणा गरेको लामो समयसम्म पनि म पुस्तक बुझाउने नबुझाउने बारेमा दुविधामै थिएँ । धेरै मस्तिष्कमन्थनपश्चात पुस्तक बुझाएकी थिएँ । अहिले उत्कृष्ट कृतिको सूचीमा परेछ । यसैलाई विजय मानेकी छु । तसर्थ पुरस्कार जित्नु र नजित्नुले मेरो साहित्यिक यात्रामा खासै अर्थ राख्दैन । मेरो लेखनयात्रा अघि बढी नै रहनेछ । कहिले सुस्त त कहिले रफ्तारमा भएपनि निरन्तरता त दिने नै छु ।
“निती” किन लेख्नु भयो ? कृति लेखनका अनुभूति र प्रकाशनका बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न !
निती लेखिनुका विभिन्न कारणहरु छन् । मैले पढाउने विद्यालयको वातावरण एक प्रमुख कारण हो । त्यहाँ बालबालिकालाई नेपाली र अग्रेंजी साहित्यका धेरैभन्दा धेरै अतिरिक्त पुस्तकहरु पढ्न प्रेरित गरिन्छ । त्यसमाथि म विद्यार्थी छँदादेखि नै साहित्यमा अभिरुची राख्ने गर्थें । त्यसैले मेरो रुची र कामबीच तादात्म्यता मिल्न गयो । जसरी पनि आफ्नो जीवनकालमा एउटा पुस्तक प्रकाशन त गरेरै छाड्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । झन् आफ्ना वरीपरी नै सामाजिक विकृतीहरु देखिरहँदा कलम चलाउने हुटहुटी नै जाग्यो । समाजमा व्याप्त कतिपय परम्परागत मान्यताहरु तोडेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रगतिशील पात्रहरु सृजना गर्ने जमर्को गरें । नारीले आफ्नो जीवनकालमा भोग्नुपर्ने सघंर्षका कथाहरु एउटै मालामा उन्ने प्रयासस्वरुप निती लेखियो तर प्रकाशनका बारेमा म पुरै अनभिज्ञ थिएँ । एकाध ठाउँमा धाएँ पनि । लकडाउनको असर सबै प्रकाशन गृहमा परेको सुनेकी थिएँ । त्यसैले धेरै सोधखोज गरिन । पछि म र मेरा श्रीमान्ले आफैं यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने निधो ग¥यौं । मलाई जसरी पनि यो उपन्यास प्रकाशन गर्नु थियो । पुस्तक छापामा गएपछि साहित्यकारहरुसँग चिनजान हुन थाल्यो । उहाँहरुले मलाई हतार नगर्न सल्लाह दिनु भएको थियो तर मैले लक्षित समयमा नै प्रकाशनसाथै विमोचन गरें ।
पहिलो कृतिका रुपमा उपन्यास ल्याउनुभयो । उपन्यासको बजारले लोभ्याएको त होइन कतै !
आख्यान मेरो सबैभन्दा मन पर्ने विधा हो । त्यसमा पनि उपन्यास पढ्न भनेपछि म हुरुक्कै हुन्छु । म किताब पढ्न थालेपछि त्यसका चरित्रमा भिजेकै हुन्छु । मन छुने उपन्यासहरु पढेपछि त्यस्तै लेख्न मन लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले एउटा सर्जक बन्ने आकांक्षा त मनमा सदैव थियो नै । आफूलाई सबैभन्दा मन पर्ने विधा भएकाले मेरो पहिलो कृति एउटा उपन्यास बन्न पुगेको हो । यो मेरो मनले लेखिएको पुस्तक हो, बजारको लोभले होइन । बजारका बारेमा म पहिले पनि अनभिज्ञ थिएँ, अहिले पनि अनभिज्ञ नै छु । बजारमा धेरै चलेका तर मलाई त्यति मन नपरेका पुस्तक पनि छन् भने बजारमा त्यति नचलेका पुस्तकहरु पनि मैले हुरुक्कै भएर पढेकी छु । त्यसैले एउटा पाठकको सम्बन्ध बजारसँगभन्दा पनि पुस्तकसँग हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
“निती”लेपुरस्कार पायो भने आर्थिक राशिले के गर्नुहुन्छ होला ?
पुरस्कारको आशले पुस्तक नलेखिएकाले होला यसका बारेका केहि सोचेकी छैन । उत्कृष्ट ११ मा पर्नुलाई नै पुरस्कार मानेकी छु । लेख्ने क्रममा आफूले अझै धेरै पुस्तक पढ्नुपर्ने महसूस चाँहि भएको छ । यद्यपी पुरस्कार पाइहालें भने शिक्षा र साहित्यकै लागी खर्च गर्नेछु ।
“निती”पछि मैले आफूलाई कथाहरुमार्फत पोख्न थालेकी छु । सम्भवतः मेरो अर्को कृति कथासङ्ग्रह हुनेछ । थुप्रै कथाहरु तयारी अवस्थामा भए पनि म योपटक पहिलेजस्तै हतार गर्ने पक्षमा छैन । सही समय आएपछि कथासङ्ग्रह पनि निस्केला । अहिले भने कथालेखनमै रमाइरहेकी छु ।
मीरा गोतामेसाहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारसाहित्यपोस्ट पुरस्कार
गीतकार राज श्रेष्ठको गीतिएल्बम लोकार्पित